Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog ye-budding, in ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kwimixholo. Ukubeka ingcinga kwisicatshulwa sakho esibonisiweyo (okanye uyilo lochwethezo) akubalulekanga xa Ukudala ubuhle bendawo yakho kunye nokuqinisekisa impumelelo.
Nantsi in, unokuba nethemplethi eyoyikisayo ye-WordPress okanye ubeke imifanekiso enomdla kwiwebhusayithi yakho NANGONA kunjalo ukuba usebenzisa ifonti esisiseko engafundekiyo (okanye okubi kakhulu kwi-Comic Sans!).
Kwaye, ulahlekile kubuhle worden typografische ye-prachtige web efumaneka kwi-Intanethi.
Ooi, ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba ifowuni ukhetha imithwalo ethembekileyo kwezinye iikhomputha, kufuneka ukhethe "ifayile ekhuselekileyo yewebhu".
1.2 Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web veilige lettertypen kwiWebhusayithi yam?
1.3 Ndingayongeza njani le mi Sebenzi ekhuselekileyo ye Webhu?
2 I-25 I-website Veilig Veilig kwiWebhusayithi Yakho
2.6 11. Nieuwe koerier
Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web veilige lettertypen kwiWebhusayithi yam?
Ukuba ufuna ukugcina i-merk kunye nebonakalayo ye-website yakho iyavumelana, ngoko usebenzisa ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ibonakala ngokuqinisekileyo njengoko uzimele.
Enyanisweni, phantse yonke i-website namhlanje isebenzisa uhlobo oluthile lwefonti ephephile. Abaqulunqi bewebhu baya kuhlala becebisa ukukhetha ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukwenzela ukuba ugweme ukuba nefonti eziqhelekileyo, njenge-Times New Roman, ibonakale xa abasebenzisi bavakashela iwebhusayoohoi yoehoi yoehoe yoehoi.
Ndingayongeza njani le mi Sebenzi ekhuselekileyo ye Webhu?
Kukho iindlela ongayisebenzisa ukuzongeza la maxwebhu kwiphepha lakho lewebhu, kodwa ukuba awukho kwiprogram okanye unamava angama-teknoloji, unokwenza ngokukhawuleza ukukopisha ikhowudi eyi-CSS enobumba kwaye unamatheiqa ziqa ziqiqiqa.
I-25 I-website Veilig Veilig kwiWebhusayithi Yakho
11. Nieuwe koerier
Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog ye-budding, în ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo
Saiba mais sobre o comércio eletrônico, bem como sobre o comércio, em e-mail, e-mail,